Indlu engaselwandle enemibono emangalisayo kufutshane neAthene
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguMarie
Igumbi lokulala eli-2 eliphambi kolwandle kwikhaya leholide elilungele abantu aba-4 ukuya kwaba-5, abanokufikelela ngokuthe ngqo kulwandle lwabucala, olubekwe kwindawo epholileyo ejikeleze ulwandle, 1h 15min ukuqhuba kude nesikhululo seenqwelomoya saseAthens. Indlu yonwabela umbono wepanoramic elwandle, ihlaziywe kwaye iyilwe ngobuchule kwaye ihonjiswe. PHAWULA:
Kwimeko apho imihla oyinqwenelayo ayifumaneki, jonga olunye uluhlu lwam lweepropathi ezimbini ezintsha ezimelene nale!
Indlu inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo (umpheki, imicrowave, umenzi wekofu, umatshini wokuhlamba izitya, ifriji enamanzi abandayo kunye nonikezelo lwe-ice cube) kunye nendawo yokuhlala ehonjiswe ngesitayile. Kukho igadi ejikeleze indlu ebonelela ngombono wepanoramic kwi-Evian gulf. Igumbi lokulala eli-1 linegumbi lokuhlambela eline-ensuite. Omabini amagumbi anombono wolwandle kwaye axhotyiswe ngabalandeli besilingi kunye neA / C. Zonke iifestile zendlu zixhotyiswe ngeminatha yezinambuzane. Indawo yokuhlala ijonge ngaselwandle kwaye ihleli kwisofa inika umbono omangalisayo wolwandle kunye nokutshona kwelanga. Indlu yahlulwe phakathi kwaye iyinxalenye ye-5000m2 estate. Lo mhlaba unegadi yabucala emalunga. I-500m2 izaliswe kukukhula okuphantsi kwezityalo nemithi yeMeditera. Ulwandle lubekwe amanyathelo ambalwa ngaphantsi kwepropati. Indawo yokuhlala ngoku ixhotyiswe ngeyunithi ye-Air-condition ngokunjalo.
Izinto eziluncedo zalapha kwilali yaseVasiliko kukuhamba kwe-5 '(intengiso enkulu, ikhemesti, ibhanki, iposi) kunye needolophu ekuchithelwa kuzo iiholide zaseChalkida nase-Eretria zihamba nge-10', zikunika ithuba lokuhamba ngokuzolileyo ngaselwandle kwaye. iithaveni ezinentlanzi kunye nokutya kwaselwandle kodwa kunye neGrisi kunye nezinye iindawo zokutya zamazwe aphesheya kunye neenketho zobomi basebusuku.
Nceda ungalibazisi ukuqhagamshelana nam ngayo nayiphi na imibuzo xa uhlanganisa izicwangciso zakho zeholide kwaye ulungiselela ukufikelela kwakho kwipropati. Ndingakuvuyela ukukunceda ngaphambi kokuhlala kwakho kodwa naxa uza kube ukwindawo yethu nengcebiso ngezinto omawuzenze kunye neendawo onokuzindwendwela, ukuba unokuthatha isigqibo sokundwendwela loo ndawo.
Nceda ungalibazisi ukuqhagamshelana nam ngayo nayiphi na imibuzo xa uhlanganisa izicwangciso zakho zeholide kwaye ulungiselela ukufikelela kwakho kwipropati. Ndingakuvuyela ukukunc…
Inombolo yomthetho: 00000138742
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Vasiliko